घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू Goncalo Guedes Childhoood कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
गोंकालो गुएडेसको हाम्रो जीवनीले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्य प्रस्तुत गर्दछ।
सरल शब्दहरूमा भन्ने हो भने यो फुटबलरको जीवनयात्राको कथा हो, बाल्यकालदेखि नै जब उनी प्रख्यात भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - गोन्कालो गुएडेजको बायोको एक सारांश।
Goncalo Guedes 'जीवन कहानी।
हो, सबैलाई थाहा छ वि's्गरको बहुमुखी प्रतिभाको विस्तृत-विस्तृत सीप-सेटको साथ. यद्यपि, फुटबल फुटको एक अंश मात्र Goncalo Guedes 'पढेको छ जीवनी जसले उनको जीवनमा थोरै ज्ञात घटनाहरूको तथ्यहरूको विवरण दिन्छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Goncalo Guedes बचपन कहानी:
सुरु गर्नका लागि, Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes नोभेम्बर १ 29 1996 of को २ day तारिख पोर्चुगलको बेन्वेन्टे नगरपालिकामा जन्म भएको थियो। उहाँ २ बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जो आफ्नो सानो चिनिएको आमा र बुबामा जन्मेका छ जसको नाम रोगारीयो गुएडेज छ।
गोन्कालो गुएडेसको प्रारम्भिक ज्ञात बाल्यकालिक तस्बिर मध्ये एक।
जवान गोन्कालो आफ्नो ज्येष्ठ भाइ पोर्चुगलको बेनवेन्टेमा रहेको आफ्नो जन्मस्थलमा हुर्किसकेका थिए र केवल दाइ - जोआओ मारिया - जसलाई भनिन्छ कि उहाँ उनी भन्दा दुई वर्ष जेठो हुनुहुन्छ।
बेन्वेन्टेमा हुर्केका, गोन्कालोले बल खेल्न थालेपछि हिड्ने साह्रै गाह्रो थियो। उसलाई खेलौनामा कुनै रुचि थिएन र अन्तत: हिंड्न सिकेपछि उनीसँग दुई बलहरू बोक्ने मन पराउँथे।
Goncalo Guedes 'परिवार पृष्ठभूमि:
यस बिन्दुमा धेरैले सोच्न थाल्नेछन् कि गोन्कालो कसरी फुटबलको प्रेममा डुबे, विशेष गरी जब उनी हुर्केका सहर फुटबल भन्दा बलात्कारको लागि चिनिन्छन्। यो याद राख्नु सार्थक छ कि जोओ (गोन्कालोको भाई) ले कोमल उमेरमा फुटबल खेल्न शुरू गरे।
तसर्थ, यो स्वाभाविक थियो कि फुटबलको लागि जोओको जोशले आफ्नो कान्छो भाईलाई रोक्न सक्छ। त्यसबाहेक, गोन्कालो गुएडेजका आमा बुबा खेलकुदहरू थिए जो आफ्ना बच्चाहरूलाई सडकमा र घरको पछाडि फुटबल खेल्न दिनुहुन्न।
युवा Goncalo Guedes को एक आफ्नो माता पिता संग एक दुर्लभ बचपन को फोटो।
कसरी क्यारियर फुटबल फुटबल गोन्कालो गुएडेसका लागि सुरु भयो:
गोन्कालो5बर्षको उमेरमा, उनले जोओसँगै रिबेटजोको फुटबल स्कूलमा प्रवेश गर्न शुरू गरे जहाँ ठूला भाईले गोलकीप गर्ने प्रशिक्षण लिएका थिए। भाइबहिनी यसमा थिए, जबकि, गोन्कालो मात्र हेर्न सक्थे किनभने त्यहाँ आफ्नो उमेरका साना बच्चाहरूको लागि कुनै टोली कोटी थिएन।
यद्यपि त्यस्ता प्रतियोगिताहरू भएको बेलामा परिचयपत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्दैन, टोलीका प्रशिक्षकले उत्सुक कान्छी बच्चाहरूलाई आफुलाई प्रमाणित गर्न कोठा दिए, यो अवसर गोन्कालोले अधिकतममा गर्नु राम्रो हो। वास्तवमा, उहाँसँग उत्कृष्ट बल क्षमताहरू थिए कि आफ्ना बुवालाई चिन्ने मानिसहरूले थिचोमिचो गरीरहेका थिए कि बच्चालाई बेन्फिकामा खेल बनाएर बनाउनु पर्छ।
पढ्नुहोस् गेडसन फर्नांडिस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
उहाँ केवल years वर्षको हुनुहुन्थ्यो तर उहाँभन्दा २ बर्ष जेठो बच्चाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
क्यान्सर फुटबलमा Goncalo Guedes को शुरुआती वर्ष:
धेरैको आवाजलाई ध्यान दिएर, गोन्कालोका बुवाले बेनफिकासँग 6. वर्षको उमेरमा प्रशिक्षण सुरु गर्यो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यथाशक्य गरे। यद्यपि3बर्ष पछि त्यो the बर्ष उमेरका आधिकारिक रूपमा एक हिस्सा बन्न सकेन बेनफिका युवा प्रणाली को।
उनी बेनिफिका युवा प्रणालीको आधिकारिक सदस्य बनेको years बर्ष पछि फुटबल प्रोडिगीको फोटो।
क्लबको स्तर मार्फत युवाको प्रगति कुनै पछाडि थिएन। उनले अप्रिल २०१ 2014 मा बेनफीका बीसँग आफ्नो व्यावसायिक शुरुआत गरे र क्लबको पहिलो टीमको लागि महिनौं पछि अक्टोबरमा प्रदर्शन गर्न सुरु गरे।
Goncalo Guedes 'जीवनी - प्रख्यात कथा को मार्ग:
बेन्फीकासँगको गोन्कालोको क्यारियरको चरम सीमामा, उनले सेप्टेम्बर २०१ in मा एलेटिको म्याड्रिड विरूद्ध गोल गरे जुन पछि चैम्पियन्स लिग समूह चरणमा सबैभन्दा युवा पोर्तुगाली स्कोरर बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो.
हेर्नुहोस् जो १ years वर्षको थियो जब उसले रोनाल्डोसँग तुलना चित्रण गर्न शुरू गरे।
अन्य प्रभावशाली प्रदर्शनहरूको बीच यस्तो आशाजनक उपलब्धिले उनलाई PSG को रडारमा पप गर्यो जुन उनले २०१ 2017 मा आफ्नो हस्ताक्षर .ण दिएका थिए। यद्यपि उनी पर्याप्त प्लेटाइम पाएनन् किनभने अन्य फराकिलो खेलाडीहरूको उपस्थिति जस्ता। जुलियन ड्रेक्सलर र एन्जिल डि मारिया पक्का गर्नुभयो कि उनी बेन्चमा थिए।
Goncalo Guedes 'जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
भाग्यवस, पीएसजीले गोंकालोलाई भ्यालेन्सियालाई २०१ loan मा loanण दिए। उनी फ्रान्सेली पक्षले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्‍यो र उनले आफ्नो जाल फिर्ताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रेसबाट गोल जाल गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रेसबाट प्राप्त गरेको विश्वासको बदला तिरे। तसर्थ, यो आश्चर्यजनक थिएन कि स्पेनिश पक्षले २०१ contract मा उनको करार स्थायी बनायो।
यस बायो ड्राफ्टको समयमा द्रुत गतिमा, गोन्कालोले भ्यालेन्सियामा आफ्नो स्थान सिमेन्ट गरेका छन् क्लबलाई हराउँदा पनि धेरै जीतहरूमा। बार्सिलोना २०१ the कोपा डेल रे फाइनल जित्न। न त उनी अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य मा बदमास हाँसो भनेर परिचित छ किनकि उनले आफ्नो देशलाई सहयोग पुर्‍याउन गरेका थिए - पोर्तुगालले २०१ first मा पहिलो पटक युईएफए नेशन्स लिग फाइनल जित्यो.
विger्गरले बेन्फीकादेखि भ्यालेन्सिया र अन्तर्राष्ट्रिय चरणहरूमा आफ्नो योग्यताको प्रमाण दिन राम्रो काम गरेको छ।
बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Goncalo Guedes 'श्रीमती को हो?
विger्गरको प्रेम जीवनमा अगाडि बढ्दै, जुन २०२० सम्म वैवाहिक सम्बन्धमा छैनन्, यद्यपि उनको एउटी राम्री प्रेमिका छ जसलाई मडालेना डे मउरा नेभ्स भनिन्छ।
यी दुई जोडी गोन्कालो बेनफिकामा कोही थिएनन् जबदेखि उनी चिनिए। के अधिक छ, गोन्कालो गुएड्सकी प्रेमिका व्यवस्थापनको स्नातक हो र उनी स्पष्टतः आफ्नो ईर्ष्यालु सम्बन्धी धेरैलाई आँखाबाट टाढा राखी राम्रो काम गर्छिन्।
गोन्कालो गुईड्सकी प्रेमिका मडालेना डे मउरा नेभ्सलाई भेट्नुहोस्।
गोन्कालो गुएडेसको पारिवारिक जीवन:
के तपाईंलाई थाहा छ Goncalo Guedes 'प्रेमिका एक मात्र व्यक्ति उसको मुटुको नजिक छैन? हामी तपाईंको लागि विger्गरको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट जानकारी ल्याउँदछौं।
पढ्नुहोस् योआओ माउन्टिनो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
Goncalo Guedes 'आमाबाबुको बारेमा:
रोगारियो गुएडेस फुटबल प्रतिभाको बुबा हुन्। गोंकालोको प्रारम्भिक जीवनमा उनले कस्तो किसिमको काम गरेका थिए भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन। जे होस्, हामी जान्दछौं कि उसले क्यारियर फुटबलमा विger्गरको सफलताको लागि क्रेडिटको उचित हिस्सा लिन्छ। यो रोगारियो थियो जसले युवा गोन्कालोलाई प्रशिक्षणका लागि लगे। ऊ खुसी छ कि उसले आफ्नो बाल्यावस्थाको सपनाहरुमा समर्पणको जीवन बितायो। यसका साथै उनी आफ्नो कान्छो छोरा भएकोमा गर्व गर्छन्।
स्पष्टतः गोन्कालो गुएडेसका आमा बुबाको सबैभन्दा कम परिचित उहाँकी मायालु आमा हुनुहुन्छ। हो, विन्गरले विरलै नै उनको बारेमा कुरा गर्छिन् तर यो उनीहरूको विकासमा उनको भूमिका असीम छ भन्ने बिना नै गइन्छ।
Goncalo Guedes अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
Goncalo Guedes भाई बहिनीहरू को बारे मा:
जस्तो कि हामीले पहिले उल्लेख गर्यौं, गोन्कालो गुइडेजका आमा बुबाका दुई बच्चा छन् जो वि which्गर र जोओ (उसको कान्छो भाई) हो। जोआओको गोलकीपरको रूपमा फुटबलमा प्रारम्भिक रुचि थियो। यद्यपि उनी गोन्कालो जस्ता प्रोफेशनल फुटबल हुन सकेनन जसलाई उसले मन पराउछ र असुरक्षित रूपमा समर्थन गर्दछ।
Goncalo Guedes आफ्नो भाइ जोआओ संग।
Goncalo Guedes नातेदारहरूको बारेमा:
विger्गरको नजिकको परिवारबाट टाढा, त्यहाँ उसको पारिवारिक जरा र पुर्खाहरूको कुनै रेकर्डहरू छैनन्। त्यस्तै, उनका हजुरबा हजुरआमा, काकी र काका ठूला अपरिचित छन्। त्यस्तै, विger्गरले अझै आफ्नो भतिजा, भतिजा र भतिजाको बारेमा तथ्यहरू प्रकट गर्न सकेको छैन।
Goncalo Guedes 'व्यक्तिगत जीवन:
गोन्कालो को हो फुटबल भन्दा पर को हो र उसको चरित्र को प्रकृति को बाहिर खेल को छ? साथीहरू र परिवारले उसको व्यक्तित्वको स्व-स्पष्ट हुन कस्तो सत्यताहरू राख्छन्? सुरुमा, उसको स्वभाव व्यक्ति जस्तो हो जुन राशि चिन्ह धनु हो।
वि win्गर अविश्वसनीय रूपमा तल पृथ्वीमा छ, भावनात्मक रूपमा बुद्धिमान, शान्त र विस्मयकारी। ऊ यात्रा गर्न, पौंडी खेल्न, परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने, अन्य रुचि र रुचि मन पराउँदछ।
के तपाई उसलाई आफ्नो परिवार र साथीहरु संग राम्रो समय बिताएको भेट्न सक्नुहुन्छ?
Goncalo Guedes 'जीवनशैली- नेट वर्थ र कसरी उसले आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ:
कसरी फुटबलरले आफ्नो पैसा कमाउँछ र खर्च गर्छ भन्ने सन्दर्भमा, यस बायो ड्राफ्ट गर्ने समयमा उसको अनुमानित net $ मिलियन डलर छ। विger्गरको धनको एक ठूलो हिस्सा मजदूरी र पारिश्रमिकमा उत्पत्ति हुन्छ जुन ऊ विश्व-स्तरीय विger्गर हो।
जून २०२० सम्म उनको $० मिलियन डलर मूल्य छ।
थप रूपमा, सोकर खेलाडीले समर्थनबाट आयको स्थिर स्ट्रिमको आनन्द लिन्छन्। यद्यपि उनी धनी फुटबलरहरूको चम्किलो जीवनशैली बिताउँदैनन्। वास्तवमा, विger्गरको नजिकका धेरैले यो प्रमाणित गर्न सक्छन् कि उसले अनावश्यक लक्जरीमा रूढीवादी जीवन शैलीको कदर गर्दछ।
गोन्कालो गुएडेस तथ्यहरू:
हाम्रो गोन्कालो गुएडेसको बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्न हामी वि the्गरको बारेमा कम ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न उचित ठान्दछौं।
पढ्नुहोस् फ्रान्सिस्को ट्राइनको बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
तथ्य # १- औसत पुर्तगाली नागरिकको सम्बन्धमा तलब ब्रेकडाउन:
युरो मा आय (€)
डलरमा आय ($)
पाउन्डमा आय (£)
प्रति वर्ष € 5,832,960 $ 6,623,617 £ 5,208,000
प्रति महिना € 486,080 $ 551,968 £ 434,000
प्रति हप्ता € 112,000 $ 127,182 £ 100,000
प्रति दिन € 16,000 $ 18,169 £ 14,286
प्रति घण्टा € 667 $ 757 £ 595
प्रति मिनेट € 11 $ 12.7 £ 9.9
प्रति सेकेन्ड € 0.18 $ 0.2 £ 0.16
औसत नागरिकसँग उसको तलब तुलना गर्दै:
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो Goncalo Guedes'बायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... औसत पोर्तुगाली जसले मासिक औसत € २,2,750० कमाउँछ उसले कम्तिमा कम्तिमा काम गर्नुपर्नेछ चौध वर्ष र दुई महिना € 486,080€XNUMX,०XNUMX० कमाउन। यो भ्यालेन्सियामा गोन्कालो गुएडेसको तलब (मासिक आधार) हो।
तथ्य # १- FIFA रेटिंग्स:
फराकिलो खेलाडीसँग overall२ अ of्कको उचित समग्र FIFA रेटिंग छ। गरीब रेटिंगसँग यसको कम प्रशंसनीय प्रदर्शनको साथ गर्न केहि छ २०१२/२०२० सत्रमा। यो केवल समयको कुरा हो उसले आफ्नो खेललाई आफ्नो पूर्ण सम्भावित रेटिंग वा points 82 अ achieve्क प्राप्त गर्न कदम चाल्नु अघि।
Points२ पोइन्ट निश्चित छ कि उसको क्यालिबरको खेलाडी राम्रो देखिदैन। यो गर्छ?
तथ्य # १- ट्रिभिया:
१ 1996 1996 to मा गोन्कालोको जन्म वर्ष भन्दा बढी छ। यो त्यही वर्ष थियो जुन जाभा प्रोग्रामिंग भाषाको पहिलो संस्करण विमोचन गरिएको थियो। १ XNUMX XNUMX also पनि बर्ष हो जुन स्वतन्त्रता दिवस र मिशन इम्पॉसिबल हिट सिनेमाहरू जस्ता चलचित्रहरू थिए।
तथ्य # १- घरपालुवा जनावरहरु लाई माया:
विन्जरसँग बिरालाहरूका लागि एक चीज छ विशेष गरी दुर्लभ जातको। ऊ तलको फोटोमा बिरालोलाई सताएको देख्न सकिन्छ। बिरालो स्पष्ट देखिन्छ कि विger्गरसँग शान्त रहन सक्छ र कुनै शंकाले उसलाई मन पराउँदैन।
दोस्रो विचारमा, के यो दुर्लभ किसिमको बच्चा तेंपा हो कि केवल बिरालो?
जीवन सजिलो बनाउनको लागि, हामीले यो तालिका तयार गरेका छौं जसले गोंकालो गुएडेस बायोग्राफी तथ्यहरूमा संक्षिप्त जानकारी प्रदान गर्दछ। यहाँ, तपाईं पोर्तुगाली फुटबलरको बारेमा द्रुत तथ्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
पुरा नाम Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
जन्म मिति नोभेम्बर १ 29 1996। को २ th दिन
जन्मस्थान पोर्चुगल मा बेन्वेन्टे नगरपालिका
प्ले गर्दै Winger
बुबा रोगारीओ गुएडेस
आमा N /
सिबलिंग जोआओ मारिया
प्रेमिका मडालेना डे मउरा नेभ्स।
नेट मूल्य Million मिलियन (२०२० फिगर)।
सोख यात्रा, पौडी खेल्ने र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने।
गोन्कालो गुएडेसको जीवनीमा यस अन्तर्दृष्टि लेख्न पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। मा Lifebogger, हामीले हाम्रा आँखा सही र न्यायोचितताका साथ बाल्यकालका कथाहरू र जीवनी तथ्या .्कहरू प्रदान गर्ने कुरामा राख्यौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न वा हिचकिचाउँनुहोस् तल बक्समा टिप्पणी दिनुहोस् यदि तपाईं केहि भेट्टाउनुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिँदैन।
भ्यालेन्सिया फुटबल डायरी
कार्लोस Vinicius बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
रुबेन डायस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जोआओ कैन्सलो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
हरिस सेफेरोभिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
थप फुटबल स्टोरीहरू
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 17, २०२०
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 16, २०२०
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 12
लाइफबगर स्टोरीहरूमा सदस्यता लिनुहोस्!
सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल स्टोरीहरू
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 10
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 25
मोहम्मद सालाह बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 22
एन'गोलो कान्टे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 15